Maningi amacala anohlonze okubhekwe ngabovu izinqumo zawo - Bayede News
Nakuba umhlaba wonke uhlaselwe ubhubhane ukhuvethe kodwa lokhu akuzange kumise ukusebenza kwezinkantolo ngisho zibe khona izinguquko ezithile ezenzekile ngokusebenza kwazo. Kulezi zinguquko kubalwa ukuqulwa kwamacala ngobuxhakaxhaka bobuchwepheshe besimanje.
Ngonyaka wezi-2020 kube namacala abehlabahlosile ezinkantolo zakuleli okulindeleke ukuthi amanye awo aqale ukuqulwa kophezulu kuphinde kukhishwe izinqumo kwamanye.
Ngonyaka odlule kuqubuke umsindo phakathi kowayenguMengameli wezwe uMnu uJacob Zuma neKhomishini ephenya ngokugwamandwa kombuso eholwa iSekela likaMehluleli Omkhulu, uRaymond Zondo, kulandela isenzo sikaZuma sokuhamba kanye nabameli bakhe bashiye iKhomishini ihleli bengagunyazwanga nguSihlalo wayo. Lokhu iKhomishini yakuthatha njengokwephula umthetho kwazise uZuma wayephoqwa isamanisi ukuba avele phambi kwayo.
IKhomishini yabe isifaka isicelo esiphuthumayo eNkantolo YoMthethosisekelo ifuna ukuthi le nkantolo enkulu kunazo zonke kuleli iphoqe uZuma ukuba avele phambi kwesigcawu seKhomishini futhi anganqabi ukuphendula imibuzo yabameli bayo.
Mhla zingama-29 kuZibandlela wezi-2020 udaba lungenile kule Nkantolo lapho omele iKhomishini, u-Advocate uTembeka Ngcukaitobi, etshele iNkantolo ukuthi uZuma ungufakazi ongawuthobeli umthetho futhi ongafuni ukuhambisana neKhomishini. Yingakho-ke befuna ukuba le Nkantolo iphoqe uZuma ukuba avele kule Khomishini.
INkantolo isigodlile isinqumo kulolu daba kanti akungabazeki ukuthi baningi abasilendele ngabovu kwazise iKhomishini uZuma ibisimkhiphele amasamanisi ukuba avele phambi kwayo izinsuku ezili-10 phakathi kukaMasingana noNhlolanja kophezulu. Kule Khomishini uZuma uthathwa njengobalulekile kwazise ofakazi abaningi balithintile igama lakhe kanti nokugwamandwa kombuso okusolwayo kuthiwa kwenzeka ngesikhathi esenguMengameli.
UMnu u-Ace Magashule
Zili-13 kuLwezi wezi-2020 uNobhala Jikelele we-African National Congress (ANC), uMnu u-Ace Magashule, unikwe ibheyili yezi-R200 000 yiNkantolo YeMantshi yaseBloemfontein kulandela ukuboshwa ngamacala enkohlakalo nokukhwabanisa (ukweba nokushintshisana ngemali). Lezi zinsolo zimayelana nenkohlakalo yokushintshwa kophahla lwetsheboya ezindlini esifundazweni iFree State.
UMagashule uphinde abhekane namacala okwephula umthetho iPrevention and Combating of Corrupt Activities Act nayisi-8 okukhwabanisa.
Sekunesikhathi eside uMagashule enukeka kule nkohlakalo okuthiwa yenzeka ngesikhathi esanguNdunankulu wakulesi sifundazwe. Lolu daba ngolunye olubhekwe ngabovu ngumphakathi njengoba kulindeleke ukuba luqhubeke kulo nyaka enkantolo kwazise umsebenzi wokushintshwa kophahla ezindlini awukaze wenziwe nakuba izinkampani ezithintekayo zakhokhelwa imali.
Ngakolunye uhlangothi, iNational Prosecuting Authority (NPA) ithi ilindele ukuthi okungenani abasolwa abathathu bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela mayela naleli cala. Ithi uphenyo ngoMagashule nabanye abasolwa abali-12 seluphothuliwe.
Omunye wemibandela yebheyili kaMagashule ukuthi angaxhumani noNks uMoroadi Cholota owayenguNobhala wakhe okumanje usephenduke ufakazi wombuso.
UMagashule nabanye abasolwa kuleli cala babuyela enkantolo mhla zili-19 kuMasingana nonyaka.
UNkk uZandile kaMajola Gumede
Umhla zingama-23 kuNdasa nonyaka uzocacisa ukuthi ngabe icala lenkohlakalo elibhekene nowayeyiMeya yeTheku, uNkk uZandile KaMajola Gumede, liyaqhubeka yini njengoba selidonse isikhathi eside lingaqulwa umbuso ukhala ngokuthi usalungisa ubufakazi.
Kuleli cala lenkohlakalo yethenda yokuthuthwa kukadoti eThekwini yezigidi ezingama-R430, uKaMajola uboshwe nabasolwa abali-17 okubalwa kubona osomabhiznisi nezikhulu zoMkhandlu.
Omunye wabameli babasolwa, u-Adv uJay Naidoo, usevele usesifakile isicelo ngaphansi kweSigaba 342A esithinta ukubambezeleka kwecala kungenasidingo efuna ukuthi inkantolo ilisule leli cala.
Ngesikhathi abasolwa bevele eNkantolo Yamacala Emali eThekwini, iSpecialised Commercial Crimes Court, mhla zili-10 kuZibandlela wezi-2020 iMantshi uDawn Somaroo ikunkankanyile kuthi uma umbuso ungabuhlanganisi ubufakazi bawo ngokushesha futhi wehluleka ukubethula ngesikhathi inkantolo iphinda ihlala, kungenzeka ilichithe leli cala.
Umbuso wona uthi buningi kakhulu ubufakazi onabo obuhlanganisa nezitatimende zasemabhange abasolwa. Ngendlela leli cala eselidonse ngayo njengoba kwaqalwa ukuboshwa kwabasolwa ngowezi-2019, ngeke kwamangaza uma inkantolo ilichitha uma umbuso wehluleka ukwethula ubufakazi onabo mhla zingama-23 kuNdasa nonyaka.
Elokubulawa kukaSenzo Meyiwa
Lisewundabamlonyeni icala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa owayengunozinti we-Orlando Pirates neqembu lesizwe lakuleli iBafana Bafana owadutshulwa mhla zingama-26 kuMfumfu wezi-2014 ekubo kanina wengane yakhe eVosloorus, eGauteng.
Emveni kweminyaka eyisithupha abulawa uMeyiwa kuze kwaba ngonyaka odlule lapho kuboshwe khona abasolwa abahlanu mayelana nokufa kwakhe okunguMuzikawukhalelwa Sibiya, uBongani Sandiso Ntanzi, uMthobisi Prince Mncube, uMthokoziseni Ziphozonke Maphisa noFisokuhle Nkani Ntuli.
Bevela okokuqala eNkantolo kaMantshi eBoksburg mhla zingama-27 kuMfumfu wezi-2020, kwaba nesidididi bengafuni ukungena ebhokisini ngoba bethi bona kabazani naleli cala abaliboshelwe.
Baningi abakholwa ukuthi ukungenelela kwenhlangano ezimele i-Afriforum kube nomthelela ekutheni kugcine kukhona ababoshwayo. Nakuba beboshiwe laba kepha kunomuzwa kwabaningi wokuthi ungqondongqondo kuleli cala usazichanasela ngaphandle. Nayo i-Afriforum isike yakuveza ukudumala kwayo ngokungaboshwa kwalo ngqondongqondo.
Abasolwa sebevela okwesibili enkantolo zingama-27 kuLwezi nyakenye icala lahlehliselwa umhla zinhlanu kuNdasa nonyaka. Nakulo leli cala isasasa likhulu kwazise baningi abakhala ngokungenziwa kobulungiswa kuleli cala nokuvikelwa kwabathile abathintekayo. Izinsolo zenkohlakalo ezibhekiswe nasemaphoyiseni zenza ukuthi leli cala libe ngelinye elibhekwe ngabovu kulo nyaka.
Umbango wobuholi kwaShembe
Udaba lombango wobuholi bebandla iNazareth Baptist Church elidume ngelikaShembe oseludonse iminyaka eyisi-9 seluseNkantolo YoMthethosisekelo kulandela ukuthi iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala nyakenye ivune umholi waleli bandla ongasekho uVela “IMisebeyelanga” Shembe njengofanele yachitha iNkosi uMduduzi “UNyazilwezulu” Shembe nayo ebisembangweni.
UNyazilwezulu olufake leli cala eNkantolo YoMtethosisekelo. NgoZibandlela iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala inqume ukuthi umholi waleli bandla uVimbeni “UThingolwenkosazane” Shembe, odlule emhlabeni ngowezi-2011, kazange aqoke indodana yakhe uNyazilwezulu njengozongena ezicathulweni zakhe uma eshona. Kunalokho, inkantolo ithole ukuthi waqoka umnewabo iMisebeyelanga naye ongasekho emhlabeni odlule udaba selusenkantolo.
Incwadi okuthiwa yabhalwa uThingo ngowezi-2000 lwayishiya kummeli walo uZwelabantu Buthelezi yiyo eyenze iNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala yafinyelela esinqumweni sokuvuna iMisebeyelanga.
Mhla zimbili kuNhlolanja nonyaka lolu daba luyabuyela eNkantolo YoMthethosisekelo lapho kulindeleke ukuthi kuhlukane inhloko nesixhanti ngobuholi baleli bandla elilandelwa yizinkumbi zabantu.
Okwenza ukuthi leli cala lilandelwe kakhulu, ikakhulukazi labo abangamalungu aleli bandla, ukuthi kuningi okuzoguquka okuhlanganisa ukwenganyelwa kwamafa alo afaka phakathi umhlaba nemali.
Okunye okubhekiwe kulo ukuthi kuzokwenzekani uma iNkantolo YoMthethosisekelo ivumelana nesinqumo seNkantolo Yokwedluliswa Kwamacala kwazise abalandeli boNyazilwezulu sebekuveze kaningi ukuthi akekho oyongena eBuhleni, lapho kuhlala khona umholi, uma lona abamlandelayo echithwa yiNkantolo. Okunye ukuthi bakholelwa ukuthi uThingo lwaluqoka uNyazilwezulu ngaphambi kokuba lwedlule emhlabeni. Ngakolunye uhlangothi, nabalandela iMisebeyelanga bamile kwelokuthi kumnyama kubovu bayongena eBuhleni uma iNkantolo YoMthethosisekelo ima esinqumweni seyoKwedluliswa Kwamacala.
Nakuba ekhona amanye amacala okulindeleke ukuba angene ezinkantolo zakuleli nonyaka kepha lawa asebaluliwe kubukeka engahamba phambili ngokuba nesasasa kuzakhamuzi zakuleli. Okuphawulekayo ukuthi kulo nyaka maningi amacala athinta inkohlakalo angase angene ezinkantolo ngenxa yobufakazi obulokhu buvela kuKhomishini yokugwamandwa kombuso. Ubufakazi obungebuhle obusavelile kuqhamuka kakhulu amagama osopolitiki abadumile iningi labo abangamalungu eqembu elibusayo.
Kanti nakwezenkolo akhona amacala asezinkantolo ezahlukene athinta abaholi abadumile esingabala kubona uShepherd Bushiri nomkakhe uMary bebandla i-Enlightened Christian Gathering Church (ECGC) ababhekene nelenkohlakalo kanye nomholi weJesus Dominion International Church uTim Omotoso obhekene nangama-63 okudlwengula nokushushumbisa abantu.
nguSabelo Mbatha Jan 15, 2021